केएमसीका चिकित्सकले जोखिम मोलेर बचाए कोरोना संक्रमितको ज्यान, २९ जना क्वारेन्टाइनमा – Health Post Nepal
२०७७ जेठ १५ गते २०:५०
सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी)का चिकित्सकले मष्तिकघात (स्ट्रोक) भएका बिरामीको द्रुत परीक्षणमा कोरोना पोजेटिभ देखिँदादेखिँदै पनि जटिल शल्यक्रिया गरेर ज्यान बचाएका छन्।
आरटी पिसिआर रिपोर्ट कुर्दासम्म बिरामीको ज्यान नै जोखिम पर्ने अवस्था रहेपछि चिकित्सकहरुले उच्च सावधानीका साथ शल्यक्रिया गरेर ज्यान बचाएका थिए।
शल्यक्रिया गरेको चौथो दिन बुधबार दोलखाका ती ७६ वर्षे पुरुषको पिसिआर रिपोर्टसमेत पोजेटिभ आएको थियो।
पिसिआर नै पोजेटिभ आएसँगै, आकस्मिक कक्षा, आइसियुदेखि ओटीसम्म ती बिरामीको सम्पर्कमा आएका न्युरो सर्जन, अन्य चिकित्सक समेत २९ जना क्वारेन्टाइनमा छन्।
क्वारेन्टाइनमा अधिकांश आरडिटी गर्नुपूर्व आकस्मिक कक्षामा ह्यान्डिल गरेका स्वास्थ्यकर्मी र सहयोगी छन्।
चिकित्सकहरू दुवाकोटस्थित केएमसीकै क्वाटरमा क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन् । ती बिरामीको इन्भेस्टिगेसनमा संलग्न वीर अस्पतालमा एक प्राविधिकसमेत अहिले क्वारेन्टाइनमा छन्।
अस्पतालका न्यूरो सर्जन डा. अमित थापाका अनुसार बिरामीको अवस्था हेरेर तत्काल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने देखिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशिकाअनुसार नै शल्यक्रिया पूर्व आरडिटी गर्दा पोजेटिभ देखिएको थियो।
पिसिआर रिपोर्ट आउन समय लाग्ने र रिपोर्ट आउँदासम्म बिरामीको ज्यानै जानसक्ने अवस्था देखेपछि चिकित्सकहरूले उच्च सावधानी अपनाएर तर जोखिम मोलेर शल्यक्रिया गरेका डा. थापाले बताए।
सुरुमा गम्भीर अवस्थाका आकस्मिक कक्षामा ल्याइएका बिरामी आकस्मिक कक्षामा रहँदै सिटी स्क्यान गरिएको थियो। परीक्षणमा ठूलो स्ट्रोक भएको र तत्काल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने देखिएपछि उनलाई आइसियुमा सारेर आरडिटी गरिएको थियो।
आरडिटी पोजेटिभ आएपछि चिकित्सकहरूले फेरि आइसोलेसन आइसियुमा सारेर परिवारसँग परामर्श लिएर शल्यक्रिया सुरु गरेका थिए ।
‘सकेसम्म कम जनशक्ति ओटीमा गयौं र पिपिई लगाएर शल्यक्रिया गर्यौं’ डा. थापाले भने, ‘पिसिआर नै पोजेटिभ आएपछि भने हामी क्वारेन्टाइनमा छौ।’
डा. थापाका अनुसार आरडिटी पोजेटिभ भए पनि पिसिआर पोजेटिभ नआउला भन्ने आशा राखेको भए पनि दुई जनामात्रै सर्जनमात्रै शल्यक्रिया कक्षमा गएर शल्यक्रिया गरेको बताए । ‘सकेसम्म कम जनशक्ति ओटीमा गयौं र पिपिई लगाएर शल्यक्रिया गर्यौं’ डा. थापाले भने, ‘पिसिआर नै पोजेटिभ आएपछि भने हामी क्वारेन्टाइनमा छौ।’
दोलखामा संक्रमण पनि नदेखिएको, बिरामीको कन्ट्रयाक हिस्ट्री पनि भएका कारणले चिकित्सकहरु पिसिआरमा कोरोना आउँदैन होला भन्ने नै आस राखेको डा. थापाले बताए ।
शल्यक्रियापछि ती बिरामी खतारमुक्त नभए पनि निकै सुधार आइसकेको अस्पतालले जनाएको छ । तर, कोरोना पोजेटिभ देखिएसँग मन्त्रालयकै निर्णयअनुसार लेवल थ्री अस्पतालको रुपमा तोकिएको त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा सारिसकिएको पनि थापाले जानकारी दिए ।
सुरुदेखि सावधानी अपनाएको थियो केएमसीले
सरकारले लकडाउन लगाएसँगै धेरैजसो निजी अस्पतालले सेवा बन्द गरे पनि केएमसीले भने व्यवस्थित रुपमा ओपिडी सेवा समेत निरन्तरता दिँदै आएको थियो ।
अस्पतालले सबै चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी एक्पोज नहोस् भनेर टिम बनाएर काममा खटाउने गर्दै आएको थियो । सरकार कारण ३९ जना चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी क्वारेन्टाइनमा जाँदा पनि कुनै पनि सेवा नरोकिएको अस्पतालले जनाएको छ ।
अहिले न्युरो सर्जरी विभागकै पनि दुई जना सर्जन क्वारेन्टाइनमा गए पनि अरु सेवामै छन् । डा. थापाका अनुसार भाइरस विकास हुनसक्ने अवधि पर्खिएर पिसिआर गरेसँगै सबै व्यक्तिगत सुरक्षा अपनाएर काम गरेका हुनाले सबै जनशक्ति काममा फर्किन सक्ने विश्वास लिए ।